Wararka Suuqa Kala Iibsiga | Ciyaaro Online
Home - Wararka Suuqa Kala Iibsiga
XAQIIQ HADAL: Neymar wuxuu doonayaa inuu ka Garab ciyaaro Cristiano Ronaldo ee ma Beddeli doono
Neymar iyo Cristiano Ronaldo. Isku saf ayey yihiin. Sida laga soo xiganayo Wargeyska ‘MARCA’, ma aha kaliya Real Madrid taageerayaasheeda kuwa doonaya in labada nin ay iska dhinac ciyaaraan, Xaqiiqdii waa Riyada uusan Habeenna ka seexan laacibka dalka Brazil. Keddib Xagaay waalli ah oo dhinaca Garoonka uusan aad ugu qanacsaneyn howsha uu ka hayo, laacibka dalka Brazil wuxuu sheegay inuu ...
Man City oo £44.5m kula wareegeysa Laacib Khadka dhexe ka ciyaara
Manchester City ayaa heshiis horudhac ah la gaartay laacibka Khadka dhexe ee kooxda Shakhtar Donetsk Fred kaasoo ku kacaya qiimo dhan £44.5 milyan oo Gani, Goal ayaa sidaas ka warqabta. City ayaa maanka ku heysay sidii ay gacanta ugu soo dhigi laheyd 24-jirkan suuqii Janaayo; waxaase guuldarreystay qorshaha saxiixiisa, iyadoo kooxda Etihad Stadium ay mar kale hadda u tafa xeydaneyso ...
Alexis Sanchez oo qeexay Sababta Rasmiga ah ee uu ugu biiray Man Utd, maxay tahay?
Laacibka dalka Chile ayaa qeexay sababta kama dambeysta ah ee uu uga dhaqaaqay kooxda Arsenal una doortay Old Trafford, iyadoo la rumeysanyahay in Red Devils ay tahay koox ku guuleysan karta koobab. Alexis Sanchez ayaa sheegay in Arsenal uu ka tegay aadayna Manchester United waayo wuxuu doonayay Fursaddii uu ugu guuleysan lahaa “Wax walba” marka uu saldhigto Old Trafford. Xiddiggii ...
Labada Manchester oo ku dagaallamaya Saxiixa difaac ka tirsan Leicester City
Manchester United iyo Manchester City ayaa foodda isku dari doona Saxiixa laacibka Harry Maguire. United ayaa kula biirtay kooxda City Doonista laacibka Leicester difaaca uga ciyaara ee Maguire, kaasoo isagaba ay muhiimad u leedahay in uu ka mid noqdo labada kooxood ee waaweyn ee reer Manchester middood. Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ayaa labaduba Calmaday Hannaanka difaaca ee laacibka Xulka ...
PSG oo Burbur u horseedeysa Khadka dhexe ee Chelsea, yeey dalbatay Markan?
N’Golo Kante waa laacibka ugu horreeya ee kooxda Paris Saint-Germain ay suuqa u geli doonto si uu kooxdan ugu shaqeeyo isagoo beddelaya laacibka Thiago Motta suuqa bartamaha Sanadka, Sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Faransiiska. Khadka dhexe ee kooxda Chelsea ayaa ah Lafta dhabarka kooxda Antonio Conte, ha yeeshee kooxda PSG ayaa rumeysan in ay sahal kula wareegi karto ...
Jurgen Klopp oo digniin Adag u diray Difaaca dunida ugu Qaalisan ee Virgil van Dijk
Hoggaamiyaha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa wuxuu digniin aad u adag siiyay difaaca laacibka uga ciyaara kooxdiisa ee Virgil van Dijk, kaasoo wax weyn laga filayo kulanka uu ku laabanayo garoonka St.Mary ee Southampton. Liverpool ayaa kulan la qaadan doonta kooxda Southampton Axadda, waana ciyaar ka tirsan horyaalka Ingiriiska. Van Dijk wuxuu ku biiray Liverpool bishii January waxaana lagu iibsaday ...
Illeyn Doqoni Dibir kama dheregto! Alvaro Morata wuxuu Oggolyahay weli in uu ku laabto Real Madrid!!
Alvaro Morata ayaa shaaciyay in isaga had iyo goor ay maskaxdiisa ka guuxeyso ku laabashada kooxdiisii hore ee Real Madrid xataa haddii uu helayo kooxo kale oo laga jecelyahay. Weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka Qaranka Spain ayaa diiday in uu beeniyo warar sheegaya in aysan habeenna Qalbigiisa ka bixin kooxda Real, iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyayna kooxda Stamford Bridge ku ciyaarta ...